CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- Hazo matevina HDPE Pipe Extrusion - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- Tsipika matevina HDPE Pipe Extrusion
Mba hamaliana ny filan'ny tsena dia nanoro hevitra tamin'ny fomba ofisialy ny andian-tsarimihetsika JWPE / T andiana famolavolana paompy matevina matevina miaraka amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina feno ho an'ny mpanjifanay aorian'ny famotopotorana marobe ary miankina amin'ny fahaizan'ny R&D matanjaka. Na ny famokarana fantsom-pamatsian-drano avo lenta na fantsom-panafody, ity andiana tsipika famokarana ity dia afaka mamaly tanteraka ny filanao.
Lisitra angon-drakitra mahazatra:PE100 级
Pipe standard: ISO 4427-2007
OD450 （SDR7.4 isaky2.5Mpa ， 61.5mm）
OD630 （SDR7.4 isaky2.5Mpa ， 85mm）
OD1000 （SDR9 isaky2.0Mpa ， 111mm）
OD1200 （SDR11 isaky1.6Mpa ， 109mm）
Mampiavaka ny tsipika famokarana:
(1)Ny fananganana endrika volavolan-tsarimihetsika 38, 40 lehibe, amin'ny fiantohana ny plastika fanamiana amin'ny alàlan'ny fivoahana 30% ka hatramin'ny 50% mihoatra ny visy nentim-paharazana;
(2)Ny fananganana rafi-pitantanana angovo fanavaozana vaovao dia mahatonga ny fanjifana angovo an'ity andiam-pamokarana ity 10% - 15% ambany noho ny an'ny vokatra mitovy amin'izany eny an-tsena;
(3)Ny fampiharana ny rafitra fanaraha-maso ny lanjan'ny metatra tsy misy lanjany dia manome antoka ny fitovian'ny savaivon'ny vokatra sy ny fahamarinan-toeran'ny lanjany isaky ny metatra;
(4)Ny fananganana ny LCT-300 karazana fidirana an-tsehatra tsy miovaova rafitra rafitra manana zon'olombelona manana fahaleovan-tena mahaleo tena afaka mifehy tsara ny fihanaky ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra ary mampihena be ny fiantraikan'ny fisehoan-javatra manjavozavo amin'ny vokatra;
(5)Ny famolavolana ny rafitra fanamainana banga dia mametaka ny fanaraha-maso ny tsingerin'ny hafanana, izay mampihena be ny fanjifana angovo ary miantoka ny fahombiazan'ny fampangatsiahana;
(6)Fitaovana fanamafisam-peo ho an'ny mpiorina HO-III dia mandray maody fanaraha-maso afovoany hanamafisana ny tsy fitoviana sy ny fiorenan'ny hafainganam-pandehan'ny tarika tsirairay, ny maody famaritana fampahalalana mety ary ny fanondroana toerana marina mampihena be ny fepetra takian'ny mpandraharaha;
(7)Ny fametrahana ny fitaovana fanapahana chipless vaovao NC-III dia manome antoka ny fanapahana vokatra milamina sy milamina ary mampihena be ny mety hisian'ny fanapahana faharoa. Ny teknolojia fanapahana hetsika roa heverina amin'ny tsipika famokarana kaliberaly lehibe dia afaka miantoka fa tsy hijanona ny tsipika famokarana noho ny fanoloana ireo faritra marefo, ka hitondra tombony maharitra sy maharitra ho an'ny mpanjifa.
HIVERINACHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- PLA / PET TALOHA HEVITRA FOMBA NY TALOHA
NEXTFitaovana tena tsara CHINAPLAS2019 - Masinina fametahana tsofina roa sosona